आयो करिब साढे ९२ लाख कित्ता सेयर, जेठ १३ देखि आवेदन दिन पाइने | Arthatantra.com
आयो करिब साढे ९२ लाख कित्ता सेयर, जेठ १३ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाण्डौं । एनआइसी एशिया बैंकले चार बराबर एक९४ः१० अर्थात एक सय कित्ता सेयर बराबर २५ कित्ताका दरले हकप्रद निष्काशन गरेको छ । आगामी जेठ १३ गते देखि यो हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाइनेछ । लगानीकर्ताले असार १५ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् ।
बैशाख ३० गतेसम्म सेयर किन्ने लगानीकर्ताले यो बैंकको हकप्रद पाउने छन् । बैशाख ३१ गते हकप्रद निष्काशनका लागि बुक क्लोज हुने जानकारी बैंकले दिएको छ ।
बैंकले ९२ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको ९२ लाख ३७ हजार पाँच सय ४० कित्ता हकप्रद जारी गर्न लागेको हो । चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न बैंकले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो हकप्रद पछि बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यो हकप्रद सेयरको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल नियुक्त भएको छ । लगानीकर्ताले सिभिल क्यापिटल र एनआएसी एशिया बैंकका सबै शाखाबाट हकप्रद सेयर भर्न पाउँछन् ।
प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले पैसा बुझाएर लगानीकर्ताले सेयर भर्न पाउँछन् । डिम्याट खातामा र कागजी प्रमाणपत्र दुबै भए हकप्रद फरक फरक भर्नुपर्ने छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्मको नाफाबाट वितरण गरिएको बोनस समेत जोड्दा बैंकको चुक्ता पुँजी यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकले ८३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने अनुमान गरिएको छ ।
एनआइसी एशियामा सर्वसाधारण सेयर धनीको लगानी ४९ प्रतिसत र सस्थापक समूहको लगानी ५१ प्रतिसत छ ।
२६ बैशाख २०७३, १०।००
सेयर बजारः आज सूचक र कारोबार दुबैमा गिरावट ! काठमाण्डौं । साताको पहिलो दिन आइतबारको सेयर बजार ओरालो लागेको छ । आज नेप्सेमा कारोबार […]
बैंकले सेयर वितरणका लागि माग्यो डिम्याट खाता, तपाईको छ ? काठमाण्डौं । सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको प्रतिफल संकलन गर्नका लागि […]
बजारमा आयो इन्भेष्टमेण्टको ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयर काठमाण्डौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले निष्कासन गरेको नयाँ सेयर अर्थात एफपिओ नेपाल स्टक […]
बैंकले ल्यायो करिब ९ लाख १८ हजार कित्ता सेयर, साउन २३ देखि भर्न मिल्ने ! काठमाण्डौं । मनास्लु विकास बैंकले यही साउन २३ गते देखि हकप्रद सेयर भर्न पाउने गरी नौ लाख […]
माइक्रोफाइनान्सले ल्यायो ५० प्रतिशत सेयर, भदौ १३ देखि किन्न मिल्ने ! काठमाण्डौं । वोमी माइक्रोफाइनान्सले पनि भदौ १३ गतेदेखि ५० प्रतिशत अर्थात दुई बराबर एकका […]
सेयर खरिद गर्ने हैन त ? दुई बैंकले ल्याए १० करोड बराबरको सेयर ! काठमाण्डौं । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र मिथिला लघुवित्त विकास बैंकले १० करोड बराबरको सेयर […]